अब सरकारी प्रयोगशालामा पनि शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न पाइने « Pen Nepal
अब सरकारी प्रयोगशालामा पनि शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न पाइने
Published On :7September, 2020 6:07 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । सर्वसाधारणले शुल्क तिरेर जुनसुकै बेलामा पनि सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न पाउने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले यसअघि सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने नौवटा सहित ३४ वटै सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण विस्तार गरिएको बताए। डा. अधिकारीले भने, ‘अब शुल्क तिरेर सबै प्रयोगशालामा परीक्षण हुनेछ, तर दैनिक गरिने कुल परीक्षणको आधा मात्रै शुल्क लिएर गर्न पाउने गरी निर्णय गरिएको छ।’
सरकारले लक्षण देखिएका, सङ्क्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका र अग्रपङ्क्तिमा खटिनेको निस्शुल्क कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने गरेको छ। अब संक्रमण भए–नभएको यकिन गर्नका लागि परीक्षण गर्न खोज्ने सबैले सबै सरकारी प्रयोगशालाबाट शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न पाउने छन्।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकाका वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रयोगशाला एवं हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी प्रयोगशालालाई सशुल्क परीक्षणको अनुमति दिएको थियो । त्यसका अतिरिक्त १३ वटा निजी प्रयोगशालामा पनि सशुल्क परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयको लाभ संक्रमण देखिएर १४ दिन आइसोलेशनमा बसेकाहरूले पनि लिन पाउने भएका छन्। हाल सरकारले आइसोलेशनपछि परीक्षणविना नै घर पठाउने व्यवस्था लागु गरेको छ।
परीक्षण रिपोर्टविना नै घर जाँदा त्यसले ढुक्क हुने अवस्था नहुने र समाजले पनि प्रश्न उठाउने गरेकाले विवरण आएका थिए। सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘आफ्नै घर छेउमा प्रयोगशाला भएर पनि परीक्षण गराउन नपाउनेहरूका लागि बाटो खोलिदिएको छ।’
सरकारले कोरोनभाइरस परीक्षणको शुल्क अधिकतम ४,४०० रुपैयाँ तोकेको छ।